चीनले दियो अमेरिकालाई गम्भीर चेतावनी ! « KBC khabar
चीनले दियो अमेरिकालाई गम्भीर चेतावनी !
२१ मंसिर २०७८, मंगलवार १६:०७
काठमाडौं, २१ मंसिर । अमेरिकाले आउँदो वर्ष चीनको बेइजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकलाई कूटनीतिक रूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणापछि चीनले पनि कडा चेतावनी दिएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले यस गल्तीको मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाको यो घोषणालाई षड्यन्त्र भन्दै सफल नहुने बताएको हो ।
अघिल्लो महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आउँदो वर्ष बेइजिङमा हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकको कुटनीतिक बहिष्कारबारे आफूले विचार गरिरहेको बताउनुभएको थियो । ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले अमेरिकी प्रशासनले ओलम्पिकको उत्सवमा योगदान नगर्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।